Izihlalo Ezintathu Ezihamba Amanzi Umathoyilethi Ophuma Emakhalekhukhwini ovela ku-Factory Price - ZNZK
1. Ukufakwa okulula kunalokho komshini wokuwasha. Odinga ukukwenza ukulihlomisa ngamanzi nangokunikezwa ugesi.
2. Nikeza isipiliyoni sokunethezeka sokuqhathanisa nenkonzo yamahhotela ezinkanyezi.
3.Ibukeka kahle futhi inemfashini.
4. Ngaphakathi kuhlanzekile futhi kuhlanzekile, kunokufakwa kwendawo yokugezela yokugeza kanye nendlu yangasese eyakhelwe ngaphakathi futhi ayinalutho lwamacala angaboni angasebenziseka ukugeza nokuhlanza.
5. Umklamo ohambisekayo wokuhambisa kabusha ngezikhathi ezithile, njengoba kungenzeka.
6. kushibhile ukubuya okuphezulu.
7. Inokusetshenziswa okuhlukahlukene kwezindawo ezinendawo enhle, ikamu lamaholide, insimu kawoyela, eyami, indawo yokwakha, ukulungiswa kabusha komzana omusha.
Langaphambilini Izihlalo Eziyisithupha Umshini Wezindlu Zangasese ze-Vacuum Outdoor
Olandelayo: Izihlalo ezihamba phambili ezihamba ngezihlalo zangasese ezi-2021 ezihamba phambili
Izindlu zangasese ezisezingeni eliphakeme
Umshini wokuhlanza indlu yangasese
Umshini Wokuhlanza Insimbi Engagqwali
Amathoyilethi Okugcina Amanzi Ayathengiswa
Amathoyilethi Okuvula Amanzi